माटोको डल्लोले बजाएपछि विशोबा खेचर हुदै सन्त ज्ञानेश्वरको शरणमा पुगे नामदेव
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, एकदिन, एक सन्त-समागममा, जसमा नामदेव पनि थिए, मुक्ता बाईले गौरा कुम्हारसँग भनिन् -भाइ! यहाँ अनेक संतहरु उपस्थित छन्, म यो चाहन्छु कि तपाँई पत्ता लगाउनुहोस कि यिनिहरुमा कुन सन्त पक्का र कुन कच्चा हुन्। गौरा कुम्हारले माटोको एक डल्लो उठाएर जसरी कुमालेले माटोको घडालाई बजाएर हेर्छ त्यस्तै उनले त्यहाँ उपस्थित सबै सन्तहरुको शिरमा त्यस डल्लोले हान्न थालिन् । जब त्यो डल्लो नामदेवको सिरमा पर्‌यो नामदेवजी रिसाए । भने- राम्रो परीक्षा भइरहेको छ; माटोको भाडो जस्तै हाम्रो सिर बजाएर देखिदैछ; यो पनि कुनै तरीका हो जाच्ने? यो देखेर गौरा कुम्हारले निर्णय दिएकि सबै सन्त पक्का छन् तर नामदेवजी कच्चा छन् । नामदेवले भने - म यस निर्णयलाई मान्दिन्। मुक्ताबाईले भनिन् -महाराज! गौरा कुम्हारले जुन निर्णय दिनुभएको छ, त्यसमाथि तपाई शंका गर्नुहुन्छ भने आफ्नो भगवानसँग कुरा गर्नेुहोला । ... बाँकी अंश»
लघुताभाष त्याग्न विनोद चौधरीको आग्रह, सीजी टेलिकमबारे खोले रहस्य
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, वरिष्ठ उद्योगपति एवं चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने लघुताभाष त्याग्न आग्रह गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
मुस्लिमहरु किन मुस्लिम देशमै शरणार्थी बनेर जाँदैनन् ?
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, के मुस्लिम शरणार्थीहरु मुस्लिम अन्य राष्ट्रमा गएका छन् ? ... बाँकी अंश»
खीर खाएपछि बुद्धलाई अन्य तपस्वीहरूले सोचे, यो त अब गयो
२०७६ माघ २३ बिहिबार, एक स्त्रीले आएर उनलाई खीर दिईन् । त्यो दिनदेखि उनले खाना खान थाले । अन्य तपस्वीहरूले सोचे, यो त अब गयो, यसको त पतन भयो । तर महात्मा बुद्धले विचार गरे, मैले साधन मनको गर्नु थियो, तर शरीरको साधन गर्न थाले, यसैकारण कष्ट भोग्नु पर्‍यो। त्यसपछि महात्मा बुद्धले मनलाई एकाग्र गर्ने साधनको ज्ञान प्राप्त गरे अनि मनलाई एकाग्र गरेर आफ्नो हृदयभित्रको ज्योतिलाई देखे । यहि नामको बोध या ज्ञान हो। त्यसपछि उनले आफ्नो जीवनमा साँचो प्रकाश र नामको प्रचार गरे । उनले आफ्नो शिष्यहरूलाई उपदेश दिदा यहि सम्झाउथे कि चीजहरुको संग्रह धेरै नगर, शरीर ढाक्ने लुगा र पेट भर्ने खाना मात्र राखेर बाँकी अरुको सेवामा लगाऊ। ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीमाथि किन लागिरहेछ साढे ४ अर्वको वाइडबडी काण्ड लुकाइएको आरोप ?
२०७६ माघ २३ बिहिबार, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रिय समितिमा देशमा भ्रष्टाचार अति नै बढेको भनी भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डकै माँग भएको लगत्तै सत्तापक्षकै सांसदहरुले संसदमा एनसेलको लाभकर, यती समूहलाई भाडामा दिएको सरकारी जग्गा र ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणबारे सदनलाई यथार्थ जानकारी दिन माग गरे । १८ माघमा केसको त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने २१ माघको संसद बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले खुलारुपले भ्रष्टाचार भएको मानिएका यी काण्डहरुका बारे सदनलाई यथार्थ जानकारी दिन माग गरेका हुन । यसले यो विमान खरिद काण्ड ‘के हो’ भन्ने फेरी एकपटक चर्चामा आएको छ । यो दिन संसदमा यस्तो माग गर्ने मध्येका एक हुन सांसद देवेन्द्र पौडेल । ... बाँकी अंश»
नेटवर्किङका नाममा ठूलो मानव तस्करीको जालो मेची वारिपारि सक्रिय
२०७६ माघ २३ बिहिबार, काकडभिट्टा। नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाको लाभ लिएर मानव तस्करी र अन्य गैरकानूनी कारोवार चलिरहेको खबर नौलो होइन । नेपालीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भारत लगी मिर्गौला झिक्ने वा वेश्यालय पुर्‍याउने काम वर्षौदेखि चलिआएको छ । ... बाँकी अंश»
के कोरोना फैलिनुमा चिनियाँ अधिकारीहरु दोषी छन् ?
२०७६ माघ २३ बिहिबार, कोरोना भाइरसले कम्तिमा १८ व्यक्ति ज्यान लिसकेपछिमात्र त्यसको प्रसारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा चीनले ११ करोड जनताको वुहान शहरमा ताला लगाउने अभूतपूर्व निर्णय गर्यो । ... बाँकी अंश»
राजालाई स्वर्गमा चाहिएला भनेर रानी, मन्त्री, सेवकलाई यसरी जीउँदै गाडिन्थ्यो
२०७६ माघ २२ बुधबार, काठमाडौं । संसारका सबै चीजहरुको नाश हुन्छ तर आत्माको नाश हुदैन । जब आत्मा आत्माबाट तृप्त हुन्छ तब फेरी संसारका कुनै चीजको आवश्यकता हुदैन तृप्त हुनको लागि । तर जो आत्मालाई आत्माबाट तृप्ती मिल्दैन उसको आत्मा अतृप्त बनिरहन्छ। त्यसको गति हुदैन र त्यो प्रेत बनेर भड्की रहन्छ । ... बाँकी अंश»
छोटो समयमा अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका मुलुक
२०७६ माघ २२ बुधबार, काठमाडौं। कुनै पनि मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा उसको अर्थतन्त्रले देखाउँछ। तर, पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्न पुगेको छ। यसले विश्वभरका मुलुक समस्यामा परेका छन्। यस्तोमा केही मुलुकले छोटो समयमा नै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् भने केहीको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर बनिसकेको छ। नेपालमा पनि आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यस्तोमा यहाँ छोटो समयमा नै आर्थिक समृद्धि तथा पतनको बाटोमा लागेका मुलुकको उल्लेख गरिएको छ। ... बाँकी अंश»
कश्मीर एकताको पाकिस्तानी राग ब्रिटिश भारतको विभाजनको अधुरो एजेन्डा
२०७६ माघ २२ बुधबार, पाकिस्तान सरकारले विदेशमा केएसडीको निरीक्षणका लागि १ लाख ४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । तर यता पीओजेकेका पीडित जनता राहतका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ... बाँकी अंश»
चाणक्यका अनुसार यस्ता महिलासँग विवाह गर्दा राम्रो
२०७६ माघ २१ मंगलबार, श्लोकमा आचार्य चाणक्यले स्त्रीको सुन्दरतालाई गौण मानेका छन् । यदि कुनै पुरुष स्त्रीको सुन्दरता देखेर विवाह गरेमा पुरुषको गल्ती हुने बताएका छन् । साथै उनले त्यस्ता पुरुषलाई मूर्खको संज्ञा दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
चीनको यो गल्तीले फैलियो कोरोना भाइरस
२०७६ माघ २१ मंगलबार, चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको असर विश्वलाई नै परिरहेको छ । यो भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने चासो सर्वत्र छ । ... बाँकी अंश»
औरंगजेबले आफ्नै पितालाई पानी समेत नदिएर मर्न छोडे, कति थिए क्रुर
२०७६ माघ २० सोमबार, काठमाडौं। बुल्लेशाह फकीर थिए। उनको जन्म मुसलमानको घरमा भएको थियो । तर मुसलमान भएर पनि न त रोजा (व्रत) राख्थे, न नमाज पढ़थे, न कहिले मस्जिद नै जान्थे। हज गर्न कहिले मक्का पनि गएनन्, तर उनी खुदाको (ईश्वरको) साँचो भक्त थिए। ... बाँकी अंश»
‘भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड’ भए प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पर्लान् ?
२०७६ माघ २० सोमबार, सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक (माघ १५–१९) मा केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माँग गरे । यद्यपि यो के कति सम्भव छ भन्ने चाहिँ छुट्टै विषय हो । तर यतिबेला भ्रष्टाचार कति मौलाए छ भन्ने सत्तारुढदलको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै यस्तो कुरा आउनु सामान्य होइन । यो दलको केन्द्रीय समिति धेरै नै ठूलो सख्या (४४३) को भएको हुँदा सबैले बोल्न पाएनन । तर कुरा राख्नचाहिँ पाए समूहविभाजन गरिएबाट । त्यही समूहको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समूह नेताले लिखित रुपमानै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । ... बाँकी अंश»
ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रसंग बेलायतको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
२०७६ माघ २० सोमबार, यससँगै बेलायतको यूरोपसँगको सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएको छ। यो बेलायतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको लागि पनि नयाँ युगको शुरूआत भएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि बताइसकेका छन्। तर, अहिले नै बेलायतमा जारी रहेका ईयूको सबै नियम भने परिवर्तन भएका छैनन्। अझै पनि बेलायतबाट ईयूबाट पूर्णरुपमा बाहिरिन अझै केही समय थप लाग्छ। फेब्रुअरी १ बाट बेलायतमा ११ महिनाको लागि संक्रमणकालीन अवस्था शुरू भएको छ। ... बाँकी अंश»
असत्य र जडपछि कुदेर आनन्द कसरी मिल्छ ?
२०७६ माघ १९ आइतबार, काठमाडौं । रुखका जराहरू तल भूइँभित्र अनि हाँगाहरू बाहिर माथि हुन्छन्, तर संसार रूपी वृक्षको जरा माथि अनि हाँगाहरू तलतिर फैलिएका हुन्छन् । जरा यानी जडतिर जानाले सुख- शान्ति तथा मोक्ष मिल्छ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चौरासीमा फँस्नाले कष्ट अथवा चौरासी लाख योनि मिल्छ । संसारमा दुई चीज छन्, एउटा चञ्चल, असत्य र जड, जसलाई अपरा प्रकृति भनिन्छ अनि अर्को सत्य, निश्चल, चेतन वस्तु छ। करोडौं मनुष्यमा विरलै मनुष्यले निश्चल तथा सत्यलाई जान्ने मन गर्दछन् । ... बाँकी अंश»